Dab xoogan oo Goordhaw ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Dab xoogan oo Goordhaw ka kacay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho
Waxaa goordhaw dab xoogan uu ka kacay Suuqa weyn ee Bakaaraha gaar ahaan qeybta loo yaqaan Cabdalla Shideeyaha, dabka ayaana hada u muuqda mid wali kusii faafaya goobo hor leh oo Suuqa katirsan.
Xaalad kacsanaan ah ayaa xiligan ka jirta Suuqa Bakaaraha gaar ahaan aaga uu dabku ka kacay, waxaana halkaasi dadka bilaabeen in ay alaabahooda kala baxaan si uusan dabku ugu soo faafin waxyeelana usoo gaarsiin.
Waxaa socda dadaalo xoogan oo lagu doonayo in dabka ka kacay Suuqa Bakaaraha lagu damiyo, waxaana goordhaw halkaasi gaaray gaadiidka dab damiska si ay uga hortagaan in dabkaasi uu sii faafo.
Ciidamo katirsan dowlada ayaa gaaray halka uu dabku ka kacay ee Suuqa Cabdalle Shideeyaha, waxaana la maqlayaa rasaas ay ridayaan ciidamada amaanka ee halkaasi gaaray, xaalada ayaana ah mid aad u kacsan.
Meydka nin Shabaab ka tirsanaa oo Afgooye lagu soo bandhigay